Dhibaato Caafimaad oo heysata gabar yar oo Soomaaliyeed oo ku nool mgaalada Muqdisho.
Date: 2011-01-11 05:04:46
Caasha Cabdi Yuusuf oo ah Gabar yar oo 5 sano jir ah islamarkaana ku xanuunsan Magaalada muqdisho ayaa waxay xanuunsantahey muddo 1sano iyo dhowr bilood ah iyadoo xanuunka hayaana uu yahey xanuuka Neefaha amaba dhanka Dareemaha Jirka ka haleeley.
Qaali Axmed Xuseen oo ah Hooyada Gabadhan ku xanuunsaneysey Gudaha magaalada muqdisho ayaa ka codsatey Shacabka soomaaliyeed gaar ahaan Ganacsatada iyo Jaaliyadaha in ay Gacan Bani'aadaminimo u fidiyaan, Gabadhaasi oo ay ka muuqato dhibaato xanuun badan oo dhanka Jismiga ah.
Gabadhani ayaa xanuusaneysey Mudda sand ah waxaana Hooyo Qaali ay carabka ku dhufatey in aysan awoodin wax u qabashada gabadheeda oo ay dhakhaatiirta Muqdisho ay sheegeen in aan Dalka Gudihiisa wax looga qaban karin.
Gabadhan xanuusan ayaa waxay tahey mid Sariir yaal ah oo aan kici Karin iyadoona cuntada aan sidii larabey u cuni Karin waxaana waalidiinta gabadhan ay sheegeen in meel walba ay geeyeen loona sheegey in aan dalka wax looga qaban Karin.
Waxa horey u dhacdey in dad soomaaliyeed oo sidan oo kale u dhibaateysnaa wax loogu qabtey ayna u qabteen dad soomaali ah iyo ajnabi intaba waxayna tahay gabadhani mid mudan in wax loo qabto maadaama ay heysato dhibaato caafimaad oo aad u ba'an iyadoo aaney gabadhani wax qabsan karin, fariisan karin Cuntadana lagu siiyo si dhibaato ah.
Si kastaba ha ahaatee Caasha Cabdi Yuusuf oo ah Gabadha Xanuunsan aaya hoyga ay ka deggan tahey Magaalada Muqdisho waxaa ka muuqanaya Druuf Nololeed iyagoo Umadda soomaaliyeed intii muslim ah ee gargaari kartaba ka codsadey in ay gargaaraan sidii ay gabadhooda wax uga qaban lahaayeen.